Puntland Voice – Page 1038 – Codka Dalka iyo Dadka
Madaxweynaha Kenya oo khudbad uu ka jeediyay Shirka Faransiiska ka socda ku soo hadal qaaday arimaha Soomaaliya
Nice (AB): Madaxweynaha Dowlada Kenya Moi Kibaki oo khudbad ka jeedinayay Shirka ka dhacaya Dalka Faransiiska ayaa ku soo hadal qaaday arimaha Soomaaliya intii uu warka waday waxaana uu si gaar ah uga hadlay burcad badeeda. Madaxweynaha oo warkiisu u […]
Mid ka mid ah Idaacadaha FM-ta Muqdisho oo laga raray Xaruntii ay ku lahayd Suuqa Bakaaraha
Muqdisho (AB):-Xalay waqti danbe ayaa si qarsoodi waxaa loo raray qalabkii Idaacada shabelle ee Magaalada Muqdisho taasoo xarunteedu ku taalay gudaha Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka idaacadaasi ay uga guurtay daartii ay […]
Xildhibaano Dumar ah oo Maanta isu soo sharaxay inay qabtaan Xilalka Gudoomie ku xigeenka 1aad iyo 2aad ee Baarlamaanka Dowlada KMG
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inay musharixiin yihiin 2 Xildhibaan oo Dumar ah kuwaasoo ka mid ah baarlamaanka Dowlada KMg Soomaaliya. Xildibaanada Khadiija Maxamed Diiriye oo Wariyayaasha kula hadleysay Muqdisho ayaa sheegtay inay u tagan tahay xilka Gudoomiye ku […]
Wasiiro ka tirsan Dowlad Goboleedka Puntland oo Maanta kulan la yeeshay Hay’adaha ka howlgala Dhulkaasi.
Wasiirka qorsheynta iyo Xiririka Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Puntland iyo Wasiiro kale ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay mas’uuliyiin ka socday Hay’adaha ka howlgala Puntland sida UNDP. Mr. Daa’uud Maxamed Cumar oo ah Wasiirka Qorsheynta oo u waramayay […]
Afhayeenka Ururka Ahlu suna oo sheegay inay Muqdisho Howlgalo ka sameeyeen.
Muqdisho (AB):-Af-hayeenka Ururka Ahl suna Sh.C/laahi C/raxmaan Abuu Yuusf Alqaadii ayaa saxaafada reer Muqdisho u sheegay maanta in howlgalo ay ciidamadoodu ka sameeyeen Muqdisho kaasoo ay ku dileen ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab waa sida uu warka u dhigay. Abu […]
Ciidamada Mujaahidiinta Al-shabaab iyo Kuwa Ururka Ahlu suna oo ku dagaalmay deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud
Muqdisho (AB):-Deegaanka lagu magacaabi Mareer-guur ee hoostaga Magaalada Dhuusa-mareeb ee Gobolka Galgaduu ayaa waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyo kuwa Ahlu suna ee halkaasi hore u joogay. Dagaalka oo la isku adeegsaday hubka […]
Munaasabada Maalinta joojinta cabsita Sigaarka ee Caalamiga h 31 May 2O1O
Maalinta 31 Maajo 2010 waa maalinta loo asteeyey joojinta cabista sigaarka ee caalamka, taasoo looga gol leeyahay in bulshada caalamka lagu wacyigeliyo khatarta uu leeyahay. Isticmaalka Tubaakada ama cabitaanka sigaarka waxay noqon kartaa : cabista sigaarka, Siigarka, Bayb-ka, Shiishadda, tubaakada la […]
Al-Qaeda’s number three leader in Afghanistan, Mustafa Abu al-Yazid, has been killed, reports say. Mr Yazid, also known as Sheikh Said al-Masri, died along with his wife and three children, Islamist websites said, quoting a statement from al-Qaeda. US officials […]
Khasaaraha Nafeed ee ka dhashay Madaafiic Xalay Fiidkii lagu garaacay Xaafado ka tirsan Magaalada Muqdisho oo sii kordhaya
Ciidamada AMISOM ee Muqdisho ku sugan ayaa xalay Madaafiic badan ku garaacday Xaafado hoos yimaada qaar ka mid ah Degmooyinka Magaalada Muqdisho ee Xarunta Dalka Soomaaliya . Wararka laga helayo goobaha Caafimaadka iyo xaafadihii madaafiicku dheceen ayaa sheegaya inay sii kordhayaan dadkiiku […]
Hogaamiye sare oo ka tirsan Ururweynha Al-qaacida oo Duqeyn Diaaradaha reer Galbeedka lagu dilay
Sida ay warbahinta u xaqiijiyeen saraakiil u hadashay Urur weynaha Alqaacida waxaa geeriyooday Alle ha naxariistee Hogaamiyihii ugu sareeyay ee Ururkaasi ujoogay Dalka Afgaanistaan markii diyaaradaha dagaalka ee reer Galbeedka ay ku duqeeyeen isagoo ku sugan wadanka Afgaanistaan meelo ka mid […]
« Previous 1 … 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 … 1,044 Next »